Fetim-pirenena – Mora ny arendrina taratasy eny an-tsena - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fetim-pirenena – Mora ny arendrina taratasy eny an-tsena
Tsy afaka misaraka amin’ny fetim-pirenena malagasy ny arendrina taratasy. Mbola vitsy izy ireny no tazana eny an-tsena amin’izao ankatoky ny fety izao. Etsy Tsara-lalàna sy Analakely ihany no ahitana izany, raha efa manenika ny tsena kosa ireo arendrina na jiro vita sinoa.
Azo lazaina ho mora sady takatry ny rehetra ny arendrina taratasy raha mitaha amin’ireo vita sinoa, satria Ar 400 ka hatramin’ny Ar 3 000 dia efa mahazo iray. Ar 1 000 hatramin’ny Ar 10 000 kosa ireo kilalao sy jirojiro samihafa vita vahiny.
Maro amin’ireo mpiantsena no efa liana amin’ny fividianana itony arendrina taratasy itony. »Efa fahazarana ny mampiasa arendrina amin’ ny asaramanitra toy izao. Manintona ny ankizy ihany koa anefa ny endrik’ireo vita sinoa ka vidina ihany koa », hoy ny renim-pianakaviana iray.
Fetim-pirenena, Mpanoratra Rijakely, 16.06.2012, 08:46	FIARAHAMONINA